Nhau - KUBVA KUZVAKAITIKA DATA DZE TIEJIA KUTI UONE YOKUTANGA MHANDO YEMUDZIMA MUMPFUNGWA DZEVASHANDI
KUBVA KUZVINHU ZVAKAWANDA DZIMWE TIEJIA KUTI UONE YOKUTANGA MHANDO YEMUDZIMA MUMPFUNGWA DZEVASHANDI
Mumakore achangopfuura, yekugadzira zvigadzirwa zveChina yakawana kukura kwekuputika, uye hondo yemugove wemusika yakatotanga. Zvinoenderana nedhavhidha yekutengesa data reChina Construction Machinery Industry Association, mugove wepamba wemusika wekumba mu2019 waive wakakura se62.2%, nepo maJapan, European, American neKorea mabhenji aive 11.7%, 15.7% uye 10.4% zvichiteerana. Izvo zvinogona kuoneka kuti nekuda kwekugadzira Nekuda kwekuvandudzwa kweiyo nhanho, kuvandudzwa kweanotevera-kutengesa sevhisi sisitimu, uye yakasarudzika yekutengesa mutemo, epamba mabhureki amuka uye ave sarudzo yevanoshandisa vazhinji.
Saka chii chiri chimiro chemusika chikamu chemakambani epamba?
Zvinoenderana nehuwandu hwesangano, chikamu chemusika cheSany, Xugong, Liugong, uye Shandong Lingong mu2019 vaive 26.04%, 14.03%, 7.39%, 7.5%, uye 7.15%, zvichiteerana. Kubva padanho rekuona, Sany inotora chikamu chimwe muzvina chemusika wekuchera, uye ongororo yekutengesa yega hapana mubvunzo kuti ndiye anokunda pamusika wepamba, achiteverwa nemhando dzakadai seXCMG neLiugong. Kubva munaNdira kusvika Chikumi 2020, Sany uye XCMG vachiri epamusoro maviri mukutengesa kwevacheri vemumba. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti Zoomlion yakafadzwawo neakasimba simba rekusimudzira. Iyo yekutengesa vhoriyamu munaJune yakaisa cheshanu pakati pezvipenga zvigadzirwa.
Tichitarisa padanho remhando dzekuchera epamba kubva kuvashandisi vekupedzisira
Saka, chikamu chemusika chinogona kuratidza kuzivikanwa kwechiratidzo mundangariro dzevashandisi? Kusvika pari zvino, Tiejia Forum nguva pfupi yadarika yakatanga ongororo ye "Domestic Excavator Brand Ranking", uye vangangoita zana vashandisi vekupedzisira vakapinda uye vakaratidza maonero avo. Ongororo yemushandisi paForamu A. Iyo
mhedzisiro yeongororo inoratidza kuti vangangoita makumi mashanu muzana evashandisi vanoisa Sany seyekutanga chigadzirwa chekumba, izvo zvinoratidza kuti huwandu hwayo hwekutengesa hwakakodzera zita rayo. Sany, Liugong, Xugong, uye Shandong Lingong ndiwo epamusoro mana mabhureki ane yakanyanya mushandisi kutarisisa. Vanopfuura makumi mapfumbamwe muzana evashandisi vanozvimisikidza mumana mana epamusoro, izvo zvinowirirana nedhata remugove wemusika.
Tichifunga nezve mashandisiro anoita vashandisi vematani
Mhando dzakasiyana dzine dzakasiyana zvigadzirwa zvigadzirwa. Zvino, zvinoenderana nemataneti akasiyana emadiki, epakati, uye akakura, vashandisi vanobhadhara zvakadii kumakambani epamba?
Tiejia yechigadzirwa raibhurari dhata inonyanya kubva kunhamba yekutsvaga kunoitwa nevashandisi. Zvinogona kuonekwa kuti sezvo Sany, Xugong, Liugong, Shandong Lingong uye mamwe mabrands anozivikanwa pakati pevashandisi, vashandisi vanozopa pekutanga kutsvaga akakodzera mashandisirwo emidziyo pakutenga muchina mutsva, uye kutenga kwekupedzisira Mhinduro yekuita sarudzo ndeye inowirirana mumugove wemusika:
1. Tichitarisa kutarisisa kwemushandisi kuzvidhori zvidiki, zvepakati nepakakura zvakateerana, SANY iri pamberi, zvakare ichisimbisa nzvimbo yayo inotungamira yepamba;
2. Kutarisa kwevashandisi kune zvidiki zvidiki Dhigirii rekuchera rakakwirira zvakanyanya kupfuura iro rekuchera kwepakati nepakakura. Izvi zvinokonzerwa nekuwedzera kukuru kwezvinodiwa zvekuvaka sekushandurwa kwenzvimbo dzekare, nzira dzekumutsiridza kumaruwa, kutenderera kwenzvimbo nekudyara gadheni, uye zvakanakira zvekuchera zvidiki, senge zvidiki uye zvinoshanduka, kupasa kwakasimba, uye kuwedzerwa kwevashandi mari. Yakawedzerawo kudiwa kwemusika kwekuchera kudiki.
Tichitarisa iko kuchinjika kwevashandisi kutarisisa kumatoni akasiyana kubva padanho rekuchengetedza
Chiyero chekuchengetedza ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuongorora kukosha kwechiratidzo. Kutarisisa kwemushandisi kune yechipiri nhare mbozha kunogona kuratidza chaiko chiyero chekuchengetedza mhando. Isu tinosarudza mavara mana epamba eSany, Xugong, Liugong, uye Shandong Lingong ayo vashandisi vanoteerera. Kubva pamaonero efoni yechipiri mbozhanhare, tinotarisa kutarisisa kwemushandisi kune akachera matoni akasiyana uye kwavo kushanduka maitiro.
zvinoenderana nedatha rwechipiri runhare mbozha, Kutarisisa kwemashini matsva kwakafanana, uye kucherechedza kwevashandisi kukuchera kudiki kunopfuura iko kwekuchera kwepakati nekuchera kukuru, uye yakachengetedza maitiro akatsiga egore rapfuura. Kubva muna Zvita 2019 kusvika Kukadzi 2020, nekuda kwekukanganisa kweChinese Nyowani Nyowani uye kumiswa kwedenda, kutarisisa kwevashandisi kune vanochera matoni akasiyana siyana kwaderera. Pakati pavo, dhata revacheri vadiki rakadonha zvakanyanya. Inobatwa nekutanga kwebasa kubva munaKurume kusvika Kubvumbi, kutarisisa kwakadzika. Yakakosha kudzokorodza, kuderera kudiki mushure meMay kwave kwakajairwa, uye pakazara iri yakati rebei kupfuura danho regore rapfuura
Maitiro aya anonyanya kuoneka mune data reSany, iro rinoenderana nenhamba hombe yemidziyo mumusika uye kukosha kwakanyanya kwedata.
Post nguva: Jan-26-2021